असार १ गते देखि आइतबार हुने गरेको साप्ताहिक विदा खारेज गर्ने यस्ताे निर्णय ! – Ramailo Sandesh
असार १ गते देखि आइतबार हुने गरेको साप्ताहिक विदा खारेज गर्ने यस्ताे निर्णय !
सरकारले आइतबार पनि दिँदै आएको साप्ताहिक विदा हटाएको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले असार १ देखि आइतबार साप्ताहिक विदा नदिने निर्णय गरेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी दिए । अब असार १ देखि शनिबार मात्र सार्वजनिक विदा हुने भएको छ ।
याे पनि, हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयको असर पेट्रोल पम्पहरूमा समेत देखिएको छ । हप्तामा शनिवार र आइतवार पेट्रोल पम्प बन्द हुँदा सोमवार पेट्रोल पम्पहरूमा भि`ड र लामो लाइन देखिएको छ । काठमाण्डौ उपत्यकाका साझा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीसहित केही पुराना पेट्रोल पम्प अगाडि इन्धन भर्नेको लामो लाइन लागेको छ ।
दुई दिन पेट्रोल हाल्न नपाउँदा सोमवार मानिसको चाप बढेको नेपाल आयल निगम लिमिटेडका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बजारका पम्पहरूमा धेरै भण्डारण गर्ने क्षमता नभएकोले र दुई दिन बिदापछि सोमवार बिहानै डिपोबाट बजारमा पेट्रोल पुर्‍याउन पनि समय लाग्ने हुन्छ । दुई दिन पेट्रोल, डिजल हाल्न नपाएकाहरू एकै दिन धेरैको सङ्ख्यामा पम्पहरूमा पुग्ने भएकाले भि`ड देखिएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोल, डिजलको अभाव भएको भन्दै नेपालमा पनि अभाव हुन सक्ने हल्ला चलेको छ । नेपालमा अहिलेसम्म डिजल, पेट्रोल आयातामा कुनै समस्या नभएकाले नआत्तिन उपभोक्तालाई प्रवक्ता उपाध्यायले आग्रह गर्नुभएको छ । काठमाण्डौ उपत्यकाबाट दैनिक साढे ६ देखि सात लाख लिटर पेट्रोल र १० देखि ११ लाख लिटर डिजल बिक्री हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
बालेन मेयर भएपछी सोच्न नसकिने गरी घट्यो खाना पकाउने ग्यासको मूल्य?